फोहोरी भ्यागुता :: Setopati
आजकल टिकटकमा धेरै चलिरहेको गीत 'सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ... सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ...। ' हो ठयाक्क यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी पनि, सोचेभन्दा अलि फरक। अनि कति फरक छ भन्ने कुरा 'फोहोरी भ्यागुता' को मैले भन्ने पुराणको बारेमा सुनेर हजुरहरु तीनछक खाइ आफ्नो मोबाइल स्क्रीनमा औँला घसार्दै गुगल सर्च गरेर भन्नु हुनेछ 'यो त मैले सोचेकै थिइनँ त!'
पुराण भन्न अघि आँखा तेज पर्नु होला, चस्मा टेबुलमा छ भने लगाईहाल्नुहोस्। भरे राति नानीबाबुलाई यो कुरा सुनाउँदा तपाई आफ्ना नानीबाबुको 'सुपरहिरो' पनि बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी गुरुत्वआकर्षणले मज्जाले तानेको कुर्सीमा बस्नुहोला वा खाटमा बस्नुहोला किनभने तपाईका वरपर ध्यान भट्काउने धेरै चिज हुनसक्छ।
जस्तै कीः तपाईको मोबाइलको स्क्रीनमा नोटिफिकेसन आउँला 'प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउँदै।' हो, येस्ता भ्रमले तपाईको सोझो मन भट्काउन सक्छ। गफ धेरै भयो, अब म कुरा गर्न जाँदै छु धेरैले देख्ने फोहोरी भ्यागुताको बारेमा।
भ्यागुता एउटा उभयचर प्राणी हो। यसको रुप, रङ्ग, आकार, प्रकार फरक-फरक हुन्छ। यो विश्वभर फैलिएर बसेको प्राणी मध्य पनि एक हो। मलिकुलर कल्क डेटिङ अनुसार यिनीहरुको उत्पत्ति करिब २ करोड ६५ लाख वर्ष अगाडि भएको थियो।
हालसम्म विश्वमा ६ हजार ३ सयभन्दा बढी भ्यागुताको प्रजाति रेकर्ड भएका छन्। जसमा 'गोलियथ' भ्यागुता सबैभन्दा ठूलो भ्यागुता हो। यस भ्यागुताको तौल करिब ३.२५ केजी हुन्छ र लम्बाई १३ इन्चसम्मको हुन्छ। यस भ्यागुताको जोडीलाई ‘हेलिकप्टर अभिभावक’ पनि भनिन्छ किनभने यिनीहरुले आफ्नो बासस्थान बनाउन ढुङ्गा पनि सार्न सक्छन्।
आफ्नो घर बनाउँदा मिस्त्रीहरुले धोका दिए यिनीहरुलाई सम्झदा पनि हुन्छ ढुङ्गा सार्नक लागि, कि कसो? एम्फिबिया वेबको अनुसार नेपालमा पनि ५५ प्रजातिको भ्यागुता रेकर्ड भएका छन्। के रे! ५५ प्रजातिका भ्यागुता? यो त पक्कै भाइले गफ दिएको होला भनेर सोच्नु भएको होला।
हुन पनि हो, हजुरहरुले आफ्नो आँगनीमा दुई-चार प्रजातिको भ्यागुता मात्र बल्ड्याङ खाइ कम्मर भाँची नाचेको देख्नु भएको होला। अनि कुनैपनि आमाबाले हामीलाई आजसम्म भन्नु पनि भएको छैन नि ‘बाबु जा, ऊ त्यहाँ आँगनमा भ्यागुता आएको छ गएर खेल, फेरि ध्यान राखेस् नि नाङ्गो हातले भ्यागुता समात्नु हुँदैन है, केही प्रजाति विषालु पनि हुन सक्छन् नि भनेर।
यदि यस्तो भएको भए तपाई हामीलाई टमाटर भ्यागुता पनि चिन्ने सौभाग्य मिल्थ्यो होला। 'ह्या भाइ, किन मजाक गरेको? भ्यागुता कहीँ चिल्लो, रातो टमाटर जस्तो हुन्छ त?'
एकदम हुन्छ हजुर! जसरी एउटा राम्री युवती र तपाईका आँखा जुध्छन्, नेपथ्यमा नारायण गोपालको रोम्यान्टिक गीत बज्न थाल्छ, मनमा त्यसै त्यसै बेचैन हुन्छ अनि तपाईको गाला स्याउ जस्ता राता राता हुन्छन्। त्येसैगरी भ्यागुताहरूको रङ्ग पनि फरक फरक हुन्छ।
सिर्के पाहा आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई आकर्षित पार्न आफ्नो रङ्ग खैरोबाट पहेलो बनाउँछ। ल हेर्नुहोस त कति कैदाको प्राणी छ यो, म जस्तो सिंगललाई पनि प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ ‘मिङगल’ हुनको लागि।
यसो भए के साँच्चीकै भ्यागुता फोहोरी, घिनलाग्दो छ त? बच्चा बेला कुल्फी, बरफ बेच्न आउँदा ती दाइले बजाएको आवाज 'भ्यापु... भ्यापु...' आज पनि म सम्झन्छु किनभने त्यो ठ्याकै भ्यागुताको ट्वार... ट्वार... आवाजसँग मेल खान जान्छ। नभुल्नुहोला, भ्यागुताले तपाईको बाल्यकाल सम्झाईरहेको छ।
के तपाईले तपाईको धान बारीमा कराउने भ्यागुता बिर्सिनुभयो जसले अन्य किट खाएर तपाइको बाली फस्टाइदिएको थियो, तपाई र तपाईको परिवारलाई भोकमरीबाट बचाईदिएको थियो? के तपाईले त्यो भ्यागुता बिर्सिनु भयो जसलाई तपाईले खडेरी लाग्दा पानी पारीदेउ भनेर पूजाअर्चना गर्नुहुन्थ्यो? के तपाईले त्यो भ्यागुता बिर्सिनुभयो जसले तपाईको घर वरपरका लामखुट्टोको बच्चा खाईदिएर तपाईलाई विभिन्न रोगबाट बचाईदियो?
तपाईले त्यो भागुताको बच्चालाई बिर्सिनुभयो जसले पानीमा भएको कुहिएको झारपात खाएर हामीलाई सफा पानी दिन्छ? के तपाईले त्यो भ्यागुता बिर्सिनुभयो जसले खाद्यचक्र सन्तुलन राख्न किरा, फट्याङ्ग्राको संख्या नियन्त्रण गर्छ? ओहो! सरि है, म भावुक भएछु भ्यागुताको पुराण सुनाउँदा। अबदेखि भ्यागुता फोहोरी कि सुग्घरी?
यो पुराण सुनेर अबदेखि तपाईहरूको अगाडि कसैले फोहोरी भ्यागुता भन्यो भने पनि झनक्क मगजको पारो तात्छ होला। हि हि... तर हात हाली नहाल्नु होला। उनीहरुलाई पनि यो पुराण सुनाए हुन्छ र धेरै पुन्य कमाउनुहोस्। अझै खुसीको कुरो के भन्दाखेरी, तपाईहरु यो पुराण सुनेर भ्यागुतालाई मार्नु हुन्न, भ्यागुताको मासु पनि खानु हुन्न र आफ्नो पाहुनालाई पनि खुवाउनु हुन्न, विद्यालय-कलेजतिर पनि अनावश्यक यसको फ्रिमा अप्रेशन पनि गर्नु हुन्न र प्रमुख कुरा त यसलाई बाटोमा देख्दा आफ्नो साधनको पाङ्ग्रोले किचिक्क पनि पार्नु हुन्न।
बरु सक्नुहुन्छ भने यसलाई बाटो पार गराईदिनु होला। यस्ता कामहरु गरे तपाईहरूको स्वर्गलोकमा बास हुनेछ र स्वर्गमा तपाईहरुको भेट राम्राराम्रा राजकुमार राजकुमारीसँग हुनेछ। हाम्रो स्वर्ग त्यो स्वर्ग हो भने इएनपीआरओएससी, सिएआरओएन, डब्लुसिएएन जस्ता संस्थाहरु भ्यागुताको स्वर्ग हो। सबैको जय! जय! जय! कथा समाप्तम्।